iPhone , iPad တွေမှာ iOS 12 beta ဗားရှင်း ဘယ်လိုတင်မလဲ?? – DigitalTimes.com.mm
iPhone , iPad တွေမှာ iOS 12 beta ဗားရှင်း ဘယ်လိုတင်မလဲ??
Ko Thuya Jun 06, 2018
WWDC 2018 ပွဲမှာတော့ Apple က သူ့ရဲ့အဓိက feature အသစ်တွေနဲ့အတူ iOS 12 ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ iOS 12 ကို တင်လိုမရသေးဘူးလား ဘာညာမေးနေသူများအတွက် iOS 12 ကို iPhone, iPad တွေမှာ ဘယ်လိုတင်မလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
iOS 12 ကို အခုချက်ချင်းတင်နိုင်ဖို့ တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းက Apple ရဲ့ Developer Program ကို Sign Up လုပ်ဖို့ပါပဲ။ public beta က လကုန်လောက်မှရမှာဆိုတော့ မစောင့်နိုင်ဘူး စမ်းချင်နေပြီဆိုရင်တော့ ခုနကပြောတဲ့အတိုင်း Sign Up သာလုပ်လိုက်ပါ။
beta ဗားရှင်းဖြစ်လို့ Stable မဖြစ်သေးတဲ့အတွက် တစ်ခုသတိထားရမှာက မတင်ခင် ဒေတာတွေကို back up လုပ်ထားဖို့ပါ။ နောက်ပြီး ဒီ beta ဗားရှင်းမှာ WWDC ပွဲတုန်းက မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ feature အကုန်လုံးလည်း မပါသေးပါဘူး။
တင်မယ် သေချာသွားရင်တော့ ပထမဆုံး ဒီပေ့ခ်ျ (samhenri.com/ios12) ကို iOS device ရဲ့ Safari browser မှာဖွင့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ပေ့ခ်ျရဲ့အောက်နားက “Download iOS 12” ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ install လုပ်ရမယ့်လမ်းကြောင်းဆီပို့ပေးပြီး reboot ချလိုက်ပါလိမ့်မယ်။
ပြီးရင်တော့ Setting ကိုသွားပြီး Software Update စလုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးသွားတာနဲ့ ကိုယ့် iPhone, iPad မှာ iOS 12 ကိုတင်ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီ။ တစ်ယောက်ကတော့ iPhone X မှာ iOS 12 ကိုတင်တာ ၁၀မိနစ်ပဲကြာပါတယ်တဲ့။ ဒါဆို ဒီ iOS 12 တင်လို့ရမယ့် device အမျိုးအစားတွေကို အောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မနေ့ကဖော်ပြခဲ့ဖူးတဲ့အတိုင်း ဒီ iOS ဗားရှင်းအသစ်မှာ လူ ၃၂ယောက်လောက် တစ်ပြိုင်နက်ဗီဒီယိုပြောလို့ရမယ့် Group FaceTime call၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်နိုင်တဲ့ Animoji၊ notification နဲ့ Screen Time ကိုစီမံနိုင်မယ့် feature တွေအပြင် ဓာတ်ပုံတွေအတွက် suggestion တွေ Siri Shortcut အတွက် အသံခိုင်းစေမှုတွေ စတဲ့ feature စုံလည်းပါဝင်လာပါတယ်။ အသုံးဝင်တဲ့ feature လေးတွေဖြစ်မဖြစ် သုံးကြည့်ပြီး အသိပေးခဲ့ပါဦး…. 😉
iPhone , iPad တှမှော iOS 12 beta ဗားရှငျး ဘယျလိုတငျမလဲ??
WWDC 2018 ပှဲမှာတော့ Apple က သူ့ရဲ့အဓိက feature အသဈတှနေဲ့အတူ iOS 12 ကိုမိတျဆကျခဲ့ပါတယျ။ iOS 12 ကို တငျလိုမရသေးဘူးလား ဘာညာမေးနသေူမြားအတှကျ iOS 12 ကို iPhone, iPad တှမှော ဘယျလိုတငျမလဲဆိုတဲ့နညျးလမျးလေးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
iOS 12 ကို အခုခကျြခငျြးတငျနိုငျဖို့ တဈခုတညျးသောနညျးလမျးက Apple ရဲ့ Developer Program ကို Sign Up လုပျဖို့ပါပဲ။ public beta က လကုနျလောကျမှရမှာဆိုတော့ မစောငျ့နိုငျဘူး စမျးခငျြနပွေီဆိုရငျတော့ ခုနကပွောတဲ့အတိုငျး Sign Up သာလုပျလိုကျပါ။
beta ဗားရှငျးဖွဈလို့ Stable မဖွဈသေးတဲ့အတှကျ တဈခုသတိထားရမှာက မတငျခငျ ဒတောတှကေို back up လုပျထားဖို့ပါ။ နောကျပွီး ဒီ beta ဗားရှငျးမှာ WWDC ပှဲတုနျးက မိတျဆကျခဲ့တဲ့ feature အကုနျလုံးလညျး မပါသေးပါဘူး။
တငျမယျ သခြောသှားရငျတော့ ပထမဆုံး ဒီပခြေျ့ (samhenri.com/ios12) ကို iOS device ရဲ့ Safari browser မှာဖှငျ့လိုကျပါ။ ပွီးရငျ ပခြေျ့ရဲ့အောကျနားက “Download iOS 12” ကိုနှိပျလိုကျတာနဲ့ install လုပျရမယျ့လမျးကွောငျးဆီပို့ပေးပွီး reboot ခလြိုကျပါလိမျ့မယျ။
ပွီးရငျတော့ Setting ကိုသှားပွီး Software Update စလုပျလိုကျပါ။ ပွီးသှားတာနဲ့ ကိုယျ့ iPhone, iPad မှာ iOS 12 ကိုတငျပွီးသားဖွဈသှားပါပွီ။ တဈယောကျကတော့ iPhone X မှာ iOS 12 ကိုတငျတာ ၁၀မိနဈပဲကွာပါတယျတဲ့။ ဒါဆို ဒီ iOS 12 တငျလို့ရမယျ့ device အမြိုးအစားတှကေို အောကျမှာဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
မနကေ့ဖျောပွခဲ့ဖူးတဲ့အတိုငျး ဒီ iOS ဗားရှငျးအသဈမှာ လူ ၃၂ယောကျလောကျ တဈပွိုငျနကျဗီဒီယိုပွောလို့ရမယျ့ Group FaceTime call၊ စိတျကွိုကျပွငျနိုငျတဲ့ Animoji၊ notification နဲ့ Screen Time ကိုစီမံနိုငျမယျ့ feature တှအေပွငျ ဓာတျပုံတှအေတှကျ suggestion တှေ Siri Shortcut အတှကျ အသံခိုငျးစမှေုတှေ စတဲ့ feature စုံလညျးပါဝငျလာပါတယျ။ အသုံးဝငျတဲ့ feature လေးတှဖွေဈမဖွဈ သုံးကွညျ့ပွီး အသိပေးခဲ့ပါဦး…. 😉
Asus က သွေးပေါင်ချိန် တိုင်းတာပေးနိုင်တဲ့ စမတ်နာရီကို မိတ်ဆက်
19:9 Display , Dual Camera များပါတဲ့ တန်ဖိုးသင့် Honor Play